Q1 2077/78(Q1 2077/78) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
हिमालयन डिस्टिलरीको नाफा ९२.१७%ले बढ्यो, ईपीएस रु. १२९.६३
काठमाण्डौ । हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा खुद नाफा ९२.१७ प्रतिशतले बढाउन सफल भएको छ। कम्पनीको शुक्रबार सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा खुद नाफा १८ करोड ७४ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ। जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा ९ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा सीमित थियो। प्रथम त्रैमासमा कम्पनीले उत्पादन...
एनएमबी बैंकको नाफामा उछाल, ईपीएस पनि १६०.३६%ले बढ्यो
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा एनएमबी बैंक लिमिटेडले ७३ करोड २९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। बैंकको शुक्रबार सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिको खुद नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा १६९.६३ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिमा बैंकको खुद नाफा २७ करोड १८ लाख रुपैयाँमा सीमित थियो। बैंकको वितरणयोग्य...
आम्दानी घट्दा नेपाल एसबीआई बैंकको नाफा ५४.१४%ले घट्यो, ईपीएस रु. ८.९५ मा सीमित
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेडको खुद नाफा ५४.१४ प्रतिशतले घटेको छ। बैंकको शुक्रबार सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिको खुद नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा घटेर २० करोड ५ लाख रुपैयाँमा सीमित बनेको हो। गत वर्ष यही अवधिमा बैंकको खुद नाफा ४३ करोड ७२ लाख रुपैयाँमा सीमित थियो...
महालक्ष्मी विकास बैंक : नाफा ४९.५०%ले बढ्यो, वितरणयोग्य मुनाफा रु. ९.९१ करोडले ऋणात्मक
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडले १५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। बैंकको शुक्रबार सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिको खुद नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ४९.५० प्रतिशतले बढेको हो। गत वर्ष यही अवधिमा बैंकको खुद नाफा १० करोड ६८ लाख रुपैयाँमा सीमित थियो। बैंकको...
एनआईसी एसिया बैंकको नाफा रु. १.०२ अर्ब, ईपीएस बढेर रु. ४२.०३
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडले १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। बैंकको शुक्रबार सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिको खुद नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा १.१३ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिमा बैंकको खुद नाफा १ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ४...
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको नाफा रु. २२ करोडले घट्यो, ईपीएस पनि ओरालो लाग्यो
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको खुद नाफा २६.१३ प्रतिशतले घटेको छ। बैंकको शुक्रबार सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिको खुद नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा घटेर ६२ करोड ३८ लाख रुपैयाँमा सीमित बनेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा बैंकको खुद नाफा ८४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रहेको...
माछापुच्छ्रे बैंकको नाफा घट्यो, ईपीएस रु. १७.०७
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले ३६ करोड ९ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ। बैंकको शुक्रबार सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिको खुद नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ४.०१ प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष यही अवधिमा खुद नाफा ३७ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको थियो। बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ६ करोड ६६...
नेपाल बंगलादेश बैंकको नाफा बढ्यो, ब्याज आम्दानी घट्यो
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेडको नाफा ४१.९० प्रतिशतले बढेको छ। बैंकको शुक्रबार सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा बैंकले ५७ करोड ११ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। गत वर्ष यही अवधिमा खुद नाफा ४० करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ५ करोड ९८ लाख...
प्रथम त्रैमासमा नेसनल माइक्रोफाइनान्सको नाफा कति ?
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम त्रैमासमा नेसनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ४ करोड ८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। संस्थाको बिहीबार सार्वजनिक प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार यो नाफा गत वर्षको तुलनामा २.७२ प्रतिशतले कम हो। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको...
स्वरोजगार लघुवित्तको नाफा रु. ३.४५ करोड, सञ्चालन घाटा रु. १४.४१ करोड
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम त्रैमासमा स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। संस्थाको बिहीबार सार्वजनिक प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा यो खुद नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा २३.०२ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले २ कराड ८० लाख रुपैयाँ...
आईपीओको तयारीमा रहेको इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको नाफामा १२.४३ प्रतिशतको गिरावट
काठमाण्डौ । हालसम्मकै ठूलो आईपीओ निष्कासनको तयारीमा रहेको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा नाफा १२.४३ प्रतिशतले घटेको छ। बैंकको बिहीबार सार्वजनिक प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा खुद नाफा १८ करोड १ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ। जुन अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा २० करोड ५७ लाख रुपैयाँ...
ग्लोबल आइएमईको इपीएसमा गिरावट, एनपीएलमा बढोत्तरी
काठमाण्डौ । देशकै ठूलो बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा १ अर्ब ५ करोड बढी खूद नाफा आर्जन गरेको छ । यो भनेको गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ४०.५८ प्रतिशतले बढी हो । खूद नाफातर्फ राम्रै प्रगति गरेको बैंकको यो अवधिमा बाँड्नमिल्ने नाफा भने २२ करोड ६१ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको छ। कोभिडका कारण निकै ठूलो आकारमा नाफा भएको...
सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स : बीमाशुल्क ४४.५०%ले बढ्यो, नाफा रु. १०.१६ करोड
काठमाण्डौ । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो त्रैमासमा अधिकांश सूचकमा प्रगति गरेको छ। कम्पनीको बुधबार सार्वजनिक पहिलो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा खुद बीमा शुल्क ४४.५० प्रतिशतले बढाउन सफल भएको छ। समीक्षा अवधिमा खुद बीमा शुल्क ८३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ रहेको छ। जुन गत वर्ष यही...
मिर्मिरे लघुवित्तको नाफा बढ्यो, ईपीएस घटेर रु. २१.६१ मा सीमित
काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रथम त्रैमासमा मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले २ करोड १७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। संस्थाको बुधबार सार्वजनिक प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार यो नाफा गत वर्षको तुलनामा १.७३ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यही अवधिमा संस्थाले २ करोड १३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थ�...